Caasimadda Deegaanka Amxaarada Oo La Duqeeyay – somalilandtoday.com
Caasimadda Deegaanka Amxaarada Oo La Duqeeyay
(SLT-Bahir daar)-Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in caasimadda deegaanka Amxaarada ee Bahir daar iyo magaalada Gonder ee aan ka fogeyn xalay gantaallo lagu weeraray.
Xafiiska ka warbixiya xaaladda degdegga ah ee lagu soo rogay deegaanka Tigraay oo hoos taga xafiiska ra’isal wasaaraha wuxuu sheegay gantaalladu iney waxyeello aan badneyn u geysteen gegida diyaaradaha ee ku yaalla labadaasi magaalo.
Weriyaha BBC-da halkaasi uga soo warrama wuxuu sheegay in gantaallada ay cabsi iyo argagax ku abuurtay shacabka magaalooyinkaasi ku nool. Gantaallada ayaa xalay saacaddu markay ahayd 11-ka fiidnimo lagu gaaray magaalooyinkasi.
Xafiiska isgaarsiinta dowladda ee degaankaasina wuxuu sheegay iney qaraxyo ka dhaceen meela ka mid ah magaalooyinkaasi.
Wariyaha BBC halkaasi uga soo warrama ayaa sheegay in qaraxa kaddib ay rasaas xooggan socotay muddo 20 daqiiqo ah, wallow aan la sheegin cidda rasaastaasi isdhaafsanysay.
Markii qaraxa laga maqlay magaalooyinkaasina waxaa la jaray Korontada inkasta oo ay marki dambe u soo laabatay.
Wararku waxay intaa ku darayaan in magaalada Baxir-daar ay saaka caadigeeda ku soo laabatay.
Maamulka deegaanka amxaaraduna wuxuu sheegay iney wadaan baaritaan ku qotoma in weerarka gantaallada ee labadaasi magaalo lagu soo qaaday uu xiriir la leeyahay deegaanka Tigraay iyo inkale.
Ciidmada gaarka ah ee gobolka Tigrey
Iyada oo baaritaanka dhacdooyinkaasi loo saaray guddi xaqiiqa raadin ah ayaa waxaa la shaacin doonaa wixii ka so baxa baaritaankaasi.
Maainti shalay ahaydna hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay deegaanka Tigraay ku edeeyeen iney dad shacab ah ah ku laayeen magaalada Mai-khadra, inkasta maamulka Tigraay ay eeddaasi gaashaanka u daruureen.